Imikhiqizo Abenzi nabaphakeli - China Imikhiqizo Factory
UKWAKHA izingxenye Umsebenzi wokusebenza noma ongenalutho otholakale ekwakheni nasekwenzeni insimbi ingabi nalutho.Izici zemishini zensimbi zingashintshwa ngokusebenzisa ingcindezi yokwenza ikhiqize ukusikeka kwepulasitiki.
Ikhwalithi Yomhlahlandlela Wekhwalithi Ephakeme Esetshenziselwe Imishini Yokwakha Esenziwe Abakhiqizi
Isondo Lomhlahlandlelakuyingxenye ebalulekile esetshenziswa inhlangano ukwakhiwa machinery.In umugqa ukukhiqizwa, it is ikakhulukazi esetshenziselwa ezokuthutha Umhlahlandlela nokusekelwa etafuleni die. Indlela yokufaka isondo elihamba phansi kufanele inqunywe ngokuya ngesimo esakhiweni - ukushumeka insimbi ye-H noma ukufaka ibhodi yokubonisa.
Uthi lokuphotha nut uhlobo lwenathi olusetshenziswa kakhulu elolini, i-trailer nezinye izimboni. Isimiso sayo sokusebenza sisebenzisa ipuleti yokukhiya ukukhiya.Kodwa, ukuthembeka kwalolu hlobo lokukhiya kuzoncishiswa ngaphansi komthwalo onamandla.Kwezinye izikhathi ezibalulekile sizothatha izinyathelo ezithile zokulwa nokuxega ukuqinisekisa ukuthembeka kokukhiya kwamantongomane.
I camshaft ka S Brake ikakhulukazi iqukethe i-CAM kanye nenduku ye-shaft, i-CAM ixhunywe nenduku ye-shaft, ebonwa yi-CAM egxilile kanye nenduku ye-shaft, isigaba se-longitudinal se-CAM sigxile ngokulingana kwe-S, futhi ama-arc angaphandle amise okwe-S I-CAM itholakala ekugcineni kwe-shaft rod.Ngakho-ke, inokufaniswa okuhle nohlelo lwamabhuleki wezimoto, futhi amandla wokudlulisa ayafana kakhulu kunqubo yokudlulisa, kanye nokushayisana I-coefficient incane, ukuze kunciphise ukuwohloka kunqubo yokusetshenziswa, yelula impilo yensizakalo futhi wehlise izindleko zokugcina.Ngakolunye uhlangothi, umphumela we-S-type camshaft wokuhambisa ungcono, ungahlangabezana ngempumelelo nezidingo ze-torque enkulu yokudlulisa , umphumela osebenzayo ungcono.
Spring yingxenye yemishini esebenzisa ukuqina ukusebenza.Izingcezu ezenziwe ngezinto ezinwebeka zikhubazeka ngaphansi kwesenzo samandla angaphandle, bese zibuyela esimweni sazo sokuqala ngemuva kokukhipha amandla angaphandle.Obizwa nangokuthi "intwasahlobo."
UFlange owaziwa nangokuthi i-Flange Flange plate.I-Flange iyinsimbi kanye ne-shaft izingxenye ezixhunyiwe, ezisetshenziselwa ukuxhumana phakathi kwemiphetho yepayipi; Kuyasiza futhi ku-flange ekungeneni nasekukhipheni kwemishini yokuxhumana phakathi kwamadivayisi amabili.